पर्यटन Archives - Nepal News Post::Nepal News Post, online news portal
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको शिलान्यास यसै वर्ष गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएका छन् । बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकारसँगको छलफल कार्यक्रममा सन् २०१९ भित्रै कम्तीमा शिलान्यास गरिसक्ने उनले बताए । सन् १९८५ देखि नै निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्ने चर्चा चले पनि काम हुन नसकेकाले अब भने यसको विकल्प नखोजिने उनको भनाइ थियो । “फास्ट ट्र्याक...
कामिरिता २३औं पटक शिखरमा पुगेर नयाँ कीर्तिमान कायम
काठमाडौं, १ जेठ । कामिरिता शेर्पाले २३औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेर नयाँ विश्व कीर्तिमान राखेका छन् । सोलुखुम्बुको थामे गाउँका ४९ वर्षिय कामिरिताले आफ्नै नाममा रहेको सर्वाधिक पटक विश्वको सर्वोच्च शिखर आरोहण गर्ने कीर्तिमान कायम गरेका हुन् । कामिरिता शेर्पा र निमा ओङ्दी शेर्पा बिहान ७ः५० बजे सगरमाथाको शिखरमा पुगेको आधार शिविरबाट पर्यटन विभागकी निर्देशक मीरा आचार्यले बताइन् । उनको आरोहण...
कर्णाली नदीमा एकै पटक १११ वटा र्‍याफ्टिङमा जलयात्रा गरिने
कैलाली । पर्यटन भ्रमण वर्ष २०२० र कैलाली भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी कर्णाली नदीमा यही महिनामा बृहत जलयात्रा हुने भएको छ । आयोजक कैलाली जिल्ला समन्वय समितिले मंगलबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनगरी चैत २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म जलयात्रा आयोजना गरिने जानकारी दिएको हो । कैलाली जिल्ला समन्वय समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले कर्णालीमा १११ वटा र्‍याफ्टिङबाट १ हजार एकसय दश जनालाई जलयात्रामा...
जापानका यि आकर्षक -‘स्नो फेस्टिवल’ जसले खडा गर्छ वर्षेनी अद्दभुत मेलाको बहार, हुन्छ अरबौँको आर्थिक कारोबार ! ( तस्बिर सहित)
सायद, हिउँ पर्ने सिजन भन्ने बित्तिकै धेरैलाई हिऊँ खेल्ने कुरा दिमागमा आईहाल्छ । जापानको पनि टोकियो जस्तो कहिले कहीँ मात्र हिऊँपर्ने ठाउँमा वस्नेहरुका लागि त हिऊँ परेपछि बढ्ने चिसो या असहज दैनिकी भन्दा पनि हिऊँ परेपछिको हिम उत्सव विशेष लाग्ने गर्दछ । यदि तपाई पनि यस्तै वर्गमा पर्नुहुन्छ भने, आउनुस् जानकारी लिऊँ जापानका केहि मुख्य स्नो फेस्टिभलका बारेमा । १.साप्पोरो...
यस्तो प्रतिवेदन आउला भन्ने सोचेको थिइनँ- मन्त्री अधिकारी
पोखरा । संसदीय लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमतिले बुझाएको प्रतिवेदनले ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको निश्कर्ष निकाल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी लगायतलाई कारबाही सिफारिस गरेपछि देशभर यसकै चर्चा छ । पर्यटनमन्त्री अधिकारीको गृहजिल्ला कास्कीमा मन्त्री अधिकारको आलोचना चुलिदै गएको छ । सामाजिक सञ्जाल वाइड बडीमय बनेको छ भने मन्त्री अधिकारीमाथि आलोचना चुलिइरहेको छ । मन्त्री अधिकारीले भने पर्यटनमन्त्री...
इतिहासमै धेरै पर्यटकः ११ महिनामै १० लाख नेपाल आए
काठमाडौँ । मुलकुमा पर्यटक आगमन उत्साहजनक रुपमा बढेको छ । सन् २०१८ को ११ महिनासम्ममा १० लाख १ हजार ९ सय ३० पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यो इतिहासमै धेरै पर्यटक आगमन हो । यो वर्ष मासिक औसत ९१ हजार ८४ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । अध्यागमन विभागले दिएको तथ्याङ्क अनुसार यो संख्या गत वर्षको सोही अवधिभन्दा १७...
गोरखा, ३ मंसिर ।गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षभित्रमा प्रदेशभित्रका सबै जनताको पहुँचमा बिजुली, खानेपानी र सडक पु¥याउने योजना बनाएको बताएका छन् । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका वडा नं १ मा आइतबार साधना लघुवित्त संस्थाको शाखा कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर देशमा आर्थिक परिवर्तन गर्ने गरी राम्रो काम गरिरहेको जनताको...
आहा ! मनकामना मन्मदिरबाट लिईएको मनमोहक तस्बिरहरु ( फोटो ग्यालरी)
धादिङ । मनकामना मन्दिरबाट देखिएका केहि मनमोहक दृश्यहरु । तस्बिर : सुमी एलसी मनोकामना ...
सरकारले छान्यो १०० नयाँ पर्यटकीय गन्तब्य, कुन जिल्लामा कुन स्थान ?
कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले ओझेलमा परेका एक सय वटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने नयाँ सयवटा पर्यटकीय गन्तब्यहरु छनोट गरेको हो । यी गन्तब्य नेपाल पर्यटन बोर्ड, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट सिफारिस गरिएकाहरु हुन् । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका लागि ६ सयभन्दा बढी स्थानहरु प्रस्तावित थिए । त्यसमध्ये कुन गन्तब्यलाई...